Realme XT: Tilmaamaha, Qiimaha iyo Daahfurka | Androidsis
Dhowr toddobaad ka hor, Realme waxay shaacisay inay tagayaan kaga tag taleefan kamaradiisu tahay 64 MP. Waxay ku ahaan laheyd sidan tan ugu horeysa, iyadoo hogaanka u heysa Redmi Note 8 oo lagu soo bandhigo saacado yar gudahood. Ugu dambeyntii, qaabkan horeyba waxaa si rasmi ah loogu soo bandhigay munaasabad ka dhacday Shiinaha. Kani waa Realme XT.
Sumadda ayaa dhowaan dib u cusbooneysiisay heerkeeda dhexe hadana way naga tagayaan taleefan ku dhex jira heerkiisa dhexe. Realme XT-gaani wuxuu gaarayaa qayb sii kordheysa, halkaas oo kaamirooyinkeeda ay yihiin dhibic xoogan, iyo cunsur hubaal ka dhalisa xiisaha dadka isticmaala suuqa.
Marka laga hadlayo qaabkeeda, waxaan arki karnaa inaysan naga tagin waxyaabo badan oo lama filaan ah. Waxaad sharad shaashad leh darajo, oo leh qaab aad u badan oo muuqaal ah kiiskan, kaas oo u oggolaanaya shaashad leh wareegyo dhuuban, oo ka faa'iideysanaya xagga hore si wanaagsan. Dhabarkiisa waxaan ka helaynaa afar kamaradood guud ahaan kiiskan taleefanka.
1 Tilmaamaha Realme XT
Tilmaamaha Realme XT
Heer farsamo waan arki karnaa taas taleefanku wuxuu ku yimaadaa inta udhaxeysa calaamadeynta bartamaha. Waxaa loo soo bandhigay sidii tusaale bixin doona waxqabad wanaagsan guud ahaan. In kasta oo kamaraduhu yihiin cunsurka ugu caansan Realme XT-daas, taas oo ay ugu wacan tahay 64 MP dareeraha ay adeegsadaan, sidaas darteedna ay tahay sumaddii ugu horreysay ee ku jirta Android ee isticmaasha. Marka waxaan rajeyneynaa inaan aragno waxa ay kaamirooyinkaani awood u yeelan doonaan. Kuwani waa qeexitaankiisa:
Shaashad: 6,4-inji IPS LCD leh xal buuxa HD +
Kaamirada gadaal: 64 MP leh aperture f / 1.4 + 8 MP oo leh aperture f / 2.25 + 2 MP + 2 MP
Batariga: 4.000 mAh oo si dhakhso leh u socota (20W)
Nidaamka Howlgalka: Android 9 Pie oo leh midab OS
Isku xirnaanta: 4G / LTE, Bluetooth, GPS, GLONASS, Dual SIM, USB
Kuwa kale: Dareemaha sawirka faraha shaashadda hoosteeda
Cabirka: 157 x 74,2 x 8,9 mm.
Shaki la'aan, dareemaheeda 64 MP waa soo jiidashada weyn. Realme XT wuxuu adeegsadaa Samsung sensor 64MP ISOCELL, kaas oo si rasmi ah loo soo bandhigay todobaadyo ka hor. Sumadda Shiinaha ayaa hoggaanka u haysa Xiaomi, hal maalin, waxayna nooga tagaysaa taleefankii ugu horreeyay ee adeegsada dareemahan. Ma noqon doonto kii ugu dambeeyay, maxaa yeelay waxaan la kulannaa dareemayaal ballan qaadaya inuu ka mid noqdo kuwa ugu caansan suuqa bilaha soo socda.
Sida processor, Snapdragon 712 ayaa loo isticmaalaa, mid ka mid ah processor-yada shirkadda Mareykanka ee heerka dhexe. Waxaa la iman RAM kala duwan iyo isku darka kaydinta uu ka soo xusho. Batariga taleefanka wuxuu leeyahay awood dhan 4.000 mAh, marka lagu daro inuu taageero u leeyahay xawaareynta degdegga ah. Dareeraha faraha ayaa ku yaal shaashadda hoosteeda, taas oo ah wax aan ka helno iyada oo ay sii kordheyso taleefannada hadda socda.
Realme XT- Xigasho: Androidcentral
Marka taleefankan la furayo dukaamada waxaan haynaa faahfaahin yar xilligan. Waxaa la xaqiijiyay in Realme XT waxaa laga bilaabi doonaa bisha Sebtember dukaamada. Tani waa inta ay shirkaddu sheegtay illaa iyo hadda. Taarikh cayiman lama sheegin lamana sheegin wax ku saabsan qiimaha. In kasta oo sharraxaad wanaagsan laga heli karo arrintan.
Maaddaama Redmi Note 8 la soo bandhigi doono dhowr saacadood gudahood, aagga dhexe ee cusub, kaas oo sidoo kale isticmaali doona dareemahan 64 MP. Sidaa darteed, waxay u badan tahay in shirkaddu sugi doonto inay aragto qiimaha ay Xiaomi ku dhigeyso taleefankan cusub, si ka dibna go'aamiya qiimaha ugu dambeeya ee Realme XT waxay ku leedahay suuqa. Waxay u badan tahay in maalmo yar gudahood aan ugu dambeyn lahaan doono dhammaan xogta ku saabsan bilaabitaankeeda suuqa.
Waayo, Waxaan si taxaddar leh u dhegeysan doonnaa wararka ku saabsan Realme XT. Waqtigaan la joogo, waxaan horeyba ugu dabaaldegi karnaa imaatinka taleefanka kamaradda 64 MP ee ugu horreeya suuqa. Shaki la'aan, tallaabo muhiim ah oo arimahan ku saabsan Android.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Realme XT: Telefoonka Kaamirada 64MP-kii Ugu Horeeyay
Galaxy M30s wuxuu la imaan doonaa batari weyn